Otu n'ime ọtụtụ ihe m mụtara mgbe m na IRCE bụ na ọ bụ maka ụdị na ndị na-emepụta ngwaahịa, ecommerce abụghị ihe dị ukwuu ha ụlọ ahịa azụmahịa n'ịntanetị dịka ọ bụ maka ụlọ ahịa na-agbada ala nke nwere ike ire ma kesaa ngwongwo ha n'aha ha.
Dika uzo ahia ahia na eme ka ha na ndi ahia ha nwee mmekorita di egwu, ha nwere ike icho ndi ozo na ndi ozo aka ka ha bawanye ahia ha. Mana ka ịrekwuo ngwongwo, ha enweela ike inweta ọdịnaya metụtara ngwaahịa ahụ iji bipụta ngwaahịa ndị ahụ na ntanetị ha.
Shotfarm's Product Content Network bụ usoro a nabatara ebe niile maka ịkekọrịta, ntụgharị, njikwa na nkesa ọdịnaya ngwaahịa. Shotfarm emere ka agbanwee ohuru Shotfarm na enye ohere ka ndị na-ere ahia gbanwee ọdịnaya ngwaahịa na ụdị ọ bụla na-enweghị ihe ọzọ na ndị nrụpụta ka ha lekwasị anya n'ịdị ọdịnaya nke ọdịnaya ha karịa nkesa ya.
Ihe karịrị 10,000 Ndị na-emepụta, ụdị, ndị na-ere ahịa na ndị nkesa na-eji Shotfarm. Na nso nso a, Shotfarm kwupụtara mmekọrịta na naRiver, Onye ndu njikwa ihe omuma banyere ihe omuma (PIM). Shotfarm Switch ga - ejikọ ya na sọftụwia PIM nke InRiver iji mee ka mgbanwe data data dị n'etiti nrụpụta, nkesa, na ndị ahịa resịva.